I-hydraulic hinge i-hinge | I-Adj Thumeniswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, inezinto ezingenakuthelekiswa nanto ngokusetyenziswa komsebenzi, umgangatho, ukubonakala, njl njl., Njani. Inkcazo ye-hydraulic hinge i-hinge Yongeza ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.
I-Hardraware yeKhabhidi yeHardraulic hinge i-hinge ye-hinge kwi-Operth Horedware ye-Open Cardware kunye nexabiso elisebenzayo.
Imveliso iyahambelana neendlela ezahlukeneyo zokubhala kubandakanya imivimbo eqhubekayo, iprints, kunye negama-lokubhala igama.
1. Singazazi ngakumbi ulwazi malunga nokupakisha?
3.Ngaba sinokwazi umgangatho ngaphambi kokubeka ityala letyala?
I-1.Free isampula: Sinikezela ngezisampulu zasimahla ngokusekwe kwiimfuno zakho ezithile ukuze zihlolwe umgangatho weemveliso zethu. Kubalulekile ukuba sifumane into oyifunayo ngokuchanekileyo.
3.Ukulungiswa kwentembeko: Sinabasasazi abaninzi kwihlabathi liphela kwaye banandipha igama eliphezulu e-US, eYurophu naseAsia. Okwangoku sinenethiwekhi yokuhambisa kumazwe angaphezu kwama-20, iYurophu neAsia. Nceda usazise ukuba sinokukwenza ntoni. Wamkelekile ukuba ngumsasazi wethu omtsha kwimakethi yakho, ujonge phambili kwintsebenziswano ende emide!
4. Iqela lethu leprogramu: Iqela lethu elinamava kakhulu, iqela eliqeqeshiweyo liya kukubonelela ngenkonzo ebalaseleyo yabathengi yonke imihla. Nanini na xa ufuna inkxaso yemveliso, iisampulu, amaxesha emveliso ngokukhawuleza, ukuthunyelwa kwemali ... Sisoloko silapha kuwe.
Ubunzulu beNdebe yeHinge
Dia. yekomityi yeHinge
Isiseko se-Hole / isiseko se-3 / i-4 hole
Uhlobo lweNdebe efumanekayo
I-45mm / 48m / 52mm
Ikhava yekomityi, isiciko sengalo
I-SGS2099A - Ikhava epheleleyo, SGS209B-I-STASH IXESHA, SGS209C-Faka
Ngokwesiqhelo isibini ngasinye kwi-polybag ngesikere, izibini ezili-100 kwibhokisi yebhokisi, okanye ipakethi njengemfuneko yakho. Iindleko ezongezelelweyo ziya kucelwa ukuba kupakishe olukhethekileyo njengebhokisi yemibala, ukupakisha iBlister, kunye NOlwane.
I-1,0000 000 i-PC / inyanga
1. UKUFAKWA KWESITHUBA SOKUGQIBELA EZIQHELEKILEYO NGOKUFANELEKILEYO KWI-DREAL STOW NOBUCHULE NOKUGQIBELA NGOKUFANELEKILEYO NGOKUFANELEKILEYO NOKUFUNDA NGOKUFANELEKILEYO, ngenxa yoko akukho lula ukungcungcutheka kwaye uhlale.
2. Isiseko sekliphu, esilula ngakumbi ukulinganiswa ngokukhawuleza, senze iphaneli yocango elula kakhulu ukuba ilungele ukonakalisa kwaye ifake ngokukhawuleza.
3. Sebenzisa i-buffer eyomeleleyo neqinileyo, kunye nomsebenzi wokuvala ozenzekelayo, emva kokuba ukhutshelwe, umnyango unokuvalwa ngobunono kwaye kancinci kwaye ngokuthe cwaka ngaphandle kwesandi sengxolo.
4. Olu hlobo lwe-hinge lunendlela ye-buffer enye, inokuzenzekelayo kwaye ivaliwe kancinci emva kokutyhala.
5. Uyilo olusisiseko lunokuba sisiko njengesicelo sakho sokutshatisa imakethi kwaye kube lula ukuphumelela abathengi bokuphela.
6. IZIXHOBO ZOKUSETYENZISWA KAKHULU, Inokuxhotyiswa ngekhava yengalo ehambelanayo, ikhava yendebe okanye ezinye izinto ngokweemfuno zakho.
7. Ukuphumelela ukuphumelela ngaphezulu kwamawaka amawaka amawaka okuvula kunye nokuvalwa kokuvalwa okunokuthenjwa kunye nokukhetha kwakho okrelekrele.